Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Qaaradda Afrika Oo Kusoo Wajahan Muqdisho
Sunday, June 24th, 2018 - 17:48:52
Monday April 17, 2017 - 09:38:49 in Wararka by Kubad Bile
Madaxweynaha xiriirka kubbadda cagta qaaradda Afrika Axmed Axmed ayaa saacadaha soo aadan kusoo wajahan caasimada Muqdisho ee,xili lagu wado inuu la kulmo madaxadda ugu sareysa dalka.
Gudoomiye Axmed ayaa la doortay 16-Maarso 2017, isagoo xilkan kala wareegay Issa Hayatou oo horay u maamulayay xiriirka kubbadda cagta qaarada Afrika intii u dhaxaysay 10-March 1998-2017.
Hoggaamiyaha kasoo jeeda dalka Madagascar ayaa casuumaad ka helay gudoomiyaha xiriirka kubbadda cagta Cabdi Qan Saciid Carab,isagoo qeyb weyn ka qaatay doorashadii bishii Maarso lagu qabtay dalka Ethopia oo ku guleystay Axmed Axmed oo ah hogaamiyaha cusub ee Caf.
Wararka soo gaarayo majalada Kubadbile ayaa ah kuwo tibaaxayo in gudoomiyaha cusub ee xiriirka CAF uu kulamo la qaadanayo maxadweynaha jamhuuriyada Soomaliya Maxamed C/llahi Maxamed (Farmaajo) iyo Raiisul Wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Kheyre,waxayna kawada hadlidoonaan kor u qaadida kubbadda cagta Soomaliya iyo in tuulada isboortiga ee Muqdisho Stadium laga saaro ciidamada Amison oo Soomaliya ku sugan mudo dhan 10-sano.
Socdaalka gudoomiye Axmed ee Muqdisho kusoo wajahan waxaa ku wehliya guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta dalka Jabuuti Saleebaan Waabari iyo madax kale oo kasocota Caf iyo Fifa.
Ugu dambeyntii mas’uuliyeenta iyo madaxada dawlada Fedraalka Soomliya iyo madaxada xiriirka kubbadda cagta Soomaliya ayaa siwadajir u booqandoono garoomada kala duwan ee dalka sida Muqdisho Stadium,Banaadir Stadium iyo Jamaacadaha Stadium,iyagoo intaa ka dib la hadlidoono warbaahinta.